स’माजसेवी एवं नेपा’ली काँग्रेसका युवा नेता राजीव विक्रम शाहले शुरु गरे निःशुल्क एम्बुलेन्स से’वा,सलाम !!!नेता ज्यु! – Khabar Patrika Np
स’माजसेवी एवं नेपा’ली काँग्रेसका युवा नेता राजीव विक्रम शाहले शुरु गरे निःशुल्क एम्बुलेन्स से’वा,सलाम !!!नेता ज्यु!
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०२, २०७८ समय: १६:५५:३६
स’माजसेवी एवं नेपा’ली काँग्रेसका युवा नेता राजीव विक्रम शाहको विशेष सह’योगमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरु भएको छ । भेरी नगरपालिका वडा नं ४ का वडा अ’ध्यक्ष खम्बजंङ्ग शाहको समन्वयमा पुर्व सभासद राजीव बिक्रम शाहको सक्रियताबाट एम्बुलेन्स गाडी सुरु गरिएको हो ।
जि’ल्ला अस्पताल जाजरकोटबाट रिफर गरेका बिरामीलाई उक्त गाडीबाट सुर्खेतदेखि नेपालगन्ज सम्म निःशुल्क आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।जाजरकोटका विभिन्न स्थान’मा वि’रामीहरुको सेवा दिन एम्बुलेन्सले सहयोग पुग्ने युवा नेता शाहले वि’श्वास लिएका छन् ।
उनले एम्बुलेन्स व्यव’स्थापनका लागि कुमारी ट्रष्ट स्थापना गरेका छन् । आफै अध्यक्ष रहेको ट्रष्टको माध्यमबाट उनले जाजरकोटमा समाज सेवाको कामहरु स”ञ्चालन गरेका छन् ।
सोमबारदेखि सञ्चालन भएको एम्बुलेन्सबाट सेवा प्राप्त गर्नका लागिसमेत उनले स्थानीयलाई सह’जीकरणका ला’गि भेरी नग’रपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष खम्ब जङ्ग शाहको मो”वाइल नं. ९८४८१३६०७७ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेस जा”जरकोटका ने”ता बेदराज सिंहको मोवाइल नं. ९८५१००७६७१ सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यस्तै एम्बुलेन्स सेवा सह’जीकरणका ला’गि काँग्रेस जा’जरकोटका नेता तेजविक्रम शाहको मोवाइल नं. ९८६८११७७७७ मा सम्पर्क गरेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।